Inyanga yeSizwe yeSondlo-iBhanki yoKutya yaseGalveston County
admin Matshi 8, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Ngomhla wenyanga kaZwelonke weSondlo kwaye sibhiyozela! Siyavuya xa ulapha! INyanga yeSizwe yeSondlo yinyanga ebekelwe bucala yokujonga kwakhona kwaye ukhumbule ukuba kutheni ukukhetha ukutya okusempilweni kunye nokwenza indlela yokuphila esebenzayo kubaluleke kangaka kuthi.
Siphila kwilizwe apho sikwazi ukuthenga ukutya okunempilo nokutsha nangaliphi na ixesha enyakeni. Asiphelelanga kukhetho lokhetho olusempilweni kodwa olo khetho luhlala lulwa nenani elifanayo lokukhetha okungenampilo. Ukufunda indlela yokutya ngcono kulapho sinokuthi sizincede sazi ukuba yeyiphi indlela yokutya ekufuneka sikhethe xa sinikwa ukhetho oluninzi. Ukukhetha ukutya okunempilo kubalulekile ukusinceda siphephe ukuwela kubomi obuhlaselwe zizifo ezifana nesifo sentliziyo okanye isifo seswekile.
Nazi ezinye iingcebiso zokunceda uphile ngendlela enesondlo ngakumbi:
1) Gcwalisa usuku lwakho ngeziqhamo kunye nemifuno!Kwisidlo ngasinye zama ukugcwalisa isiqingatha seplate yakho ngeziqhamo okanye imifuno. Zitye njengamashwamshwam endaweni yezinto ezenziweyo. Ukuba uthenga iziqhamo kunye nemifuno ekwixesha lonyaka zihlala zitshiphu kwaye uninzi alufuni lungiselelo lokutya.
2) Bopha iziselo ezihlwahlwazayo kunye neziselo zamandla!Sela amanzi amaninzi yonke imihla. Umzimba wakho uya kukubulela! Unokuba neentloko ezingaphantsi, ulale ngcono, kwaye ube namandla angaphezulu. Imilebe eyomileyo kunye nezikhonkwane ezinobukrelekrele ziimpawu zokuphelelwa ngamanzi emzimbeni ngoko ke thatha amanzi amaninzi ukuba unenye yezo mpawu.
3) Bukela iinxalenye zakho!Ngexesha elizayo xa ufuna ukunyanga ipitsa emva kweveki ende usemsebenzini, nceda uyenze, kodwa khumbula ukugcina iinxalenye zakho zilawula. Yonwabela ipitsa kunye nesaladi esecaleni okanye icala leziqhamo. Zama kwaye ungakutyi ipitsa iphela kodwa ugcine ezinye iziqwenga zokutya okuseleyo kuyo yonke iveki. Ulawulo lwesahlulo lungakhokelela ekutyeni okuncinci, okunokunciphisa iindleko zokutya.
4) Zama ukutya okutsha kube kanye ngeveki!Ukuzama ukutya okutsha veki nganye kunokukubhenca kwiincasa ongazange uzibone. Ingakhokelela ekuphekeni ngakumbi kunye nokutya okunempilo ngokubanzi. Ukuvezwa kukutya okutsha kungakhokelela ekuvezeni iivithamini kunye neeminerali ekusenokwenzeka ukuba awukazifumani okwangoku.
5) Yiba esebenzayo!Thatha imizuzu engama-30 uhambe yonke imihla okanye uziqhelanise neyoga ukuba ufumana imizuzu embalwa kuye. Ukuba unamava ngokuphila ubomi obusebenzayo, zama ukubaleka iintsuku ezi-3 ngeveki okanye undwendwele umthambo amaxesha ama-3-4 ngeveki. Ukwenza ezi zinto ziphambili kuya kubanceda bazenze imikhwa kwaye bancede umzimba wakho uzive ungcono ngokubanzi.
Siseneeveki ezininzi kwiNyanga yeSizwe yeSondlo kwaye ndifuna ukuva imibuzo yakho! Nceda undibuze nayiphi na okanye yonke imibuzo yakho yesondlo. Thumela ukuba jade@galvestoncountyfoodbank.org. Ndizakuchitha le nyanga ndibaphendula.
egqithileyo ngeposi Previous: Okulungileyo, Okubi, Okubi kweSwekile
Okulandelayo elilandelayo: IVeki yokungondleki